भुसिया कुकुर न्यूनीकरणका लागि बागलुङमा थालियो बन्ध्याकरण « News24 : Premium News Channel
भुसिया कुकुर न्यूनीकरणका लागि बागलुङमा थालियो बन्ध्याकरण
बागलुङ, २३ पुष । सडकमा छाडा कुकुरहरुको संख्या बढ्दै गएपछि बागलुङमा बन्ध्याकरण गर्न थालिएको छ ।
सडकमा रहेका छाडा कुकुरका कारण नागरिकहरुले समस्या भोगिरहनुपरेको एवं पछिल्लो समय सडकमा कुकुरको संख्या बढ्दै गएपछि दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेकाले बन्ध्याकरण गरी न्यूनीकरण गर्न बागलुङमा बुधबार र बिहीबार शिविर नै सञ्चालन गरिएको छ ।
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, केन्द्रीय रिफरल अस्पताल काठमाण्डौँ एवं बागलुङ नगरपालिकाको संयुक्त पहलमा सडकमा छाडा छोडिएका कुकुर तथा घरपालुवा कुकुरलाई समेत बन्ध्याकरणमा समावेश गरिएको छ ।
कुकुरकै टोकाईबाट कयौँ घाइते भएर पोखरा, काठमाण्डौँसम्म उपचार गर्न जानुपर्ने समस्या पनि देखिने गरेको छ । त्यसकारण बन्ध्याकरण शिविरमा रेबिज विरुद्धको खोप पनि लगाइएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङले जनाएको छ ।
बुधबार मात्रै ७९ वटा छाडा तथा घरपालुवा कुकुरहरुको बन्ध्याकरण गरिएको छ । बरिष्ठ पशु चिकित्सक डा.शंकर पाण्डे, पशु चिकित्सक डा. अर्जुन अर्याल, डा. विकास गिरी, खितबहादुर श्रेष्ठ लगायत १० जनाको विज्ञ टोलीले शिविरमा सहजिकरण गरेको छ ।
एउटा शिविर सञ्चालन गर्दा दुई सय कुकुरको बन्ध्याकरण गर्ने योजना बनाइएको पशु चिकित्सक खितबहादुर श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘एउटा कुकुरले वर्षमा दुई पटक मात्रै ब्यायो भने पनि एउटाले ६ वटा पाउछ, यस्ता कयौँ कुकुर सडकमा छन्, त्यसैले कुकुरको न्यूनीकरण भएपछि रेबिज रोग पनि घट्ने भएकाले यो अभियान सुरु भएको हो ।’
भुसिया कुकुरलाई न्यूनिकरण गर्न तथा सन् २०३० सम्म रेबिज उन्मुलन गर्नका लागि बन्ध्याकरण थालिएको श्रेष्ठले बताए । यस्तै पशु चिकित्सक डा.अर्जुन अर्यालले बन्ध्याकरण गर्दा कुकुरलाई केही समय पीडा हुने भएपनि लामो समय दुःखाई नहुने गरी औषधि दिने गरेको बताए ।
उनले एक दिनमा ६० भन्दा बढी कुकुरको बन्ध्याकरण गरेको समेत बताउछन् । कुकुरको बन्ध्याकरणको लागि यो समय उपयुक्त भएको बताउँदै घाउ पाक्ने सम्भावना नरहेको अर्यालले बताए ।
बागलुङमा बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गर्नका लागि भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, केन्द्रीय रिफरल अस्पताल काठमाण्डौँ एवं बागलुङ नगरपालिकाको संयुक्त ५ लाख रुपैँया बिनियोजन गरेका हुन् ।
आफ्नो कुकुरलाई बन्ध्याकरण गराउन बागलुङ नगरपालिका–१३ पैयुँपाटाबाट आएका भोलानाथ रिजालले बन्ध्याकरण शिविर राखेर राम्रो काम गरेको बताए । धेरै कुकुर पाल्न नसकिने र रेबिज विरुद्धको ईन्जेक्सन लगाउने भएकोले आफुले कुकुर लिएर आएको रिजालले बताए ।
यसबाट कुकुरको संख्या नियन्त्रण हुने र टोकी हाले पनि रेबिज लाग्ने खतरा नरहने भएकोले शिविर महत्वपूर्ण भएको बताए ।
बागलुङका विभिन्न ग्रामिण भेगहरुमा कुकुरले मानिस तथा पशु चौपायालाई समेत टोकेर घाइते बनाएका घटनाहरु पनि समय समयमा आउने गरेका छन् । बागलुङसंगै म्याग्दी एवं काठमाडौँ उपत्यकामा पनि शिविर सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत तीनवटा दस्तावेजमाथि समूहगत